သူများအနုပညာရှင်သားသမီးတွေလို မလှတာကြောင့် မျက်နှာငယ်ခဲ့ရတဲ့ မေမေ့အတွက် ကြိုးစားပြီး ဝိတ်ချပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ မေခလာရဲ့သမီးလေး ပြည့်ပြည့် - Cele Connections
29/10/2020 By bilie Celebrity
သီချင်းမြူးမြူးလေးတွေကို သီဆိုတတ်ပြီး အမြဲတမ်း သွက်လက်ချက်ချာနေတဲ့ အဆိုတော် မေခလာကတော့ ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုကို ရရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မေခလာက သရုပ်ဆောင် ရန်ကျော်နဲ့ လက်ထပ်ပြီး သမီးလေးတစ်ယောက်တည်းကိုသာ မွေးဖွားထားပြီး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုလေးကို တည်ဆောက်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ (၂)လအတွင်း ကိုယ်အလေးချိန် ပေါင်(၅၀)ကျော် ချနိုင်ခဲ့တဲ့ မေခလာရဲ့သမီးလေး ပြည့်ပြည့်က သူမဝိတ်ချရခြင်းအကြောင်းကို အခုလိုပဲ ပြောလာပါတယ်။
“ညီမကို ဝိတ်ချဖို့ တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့တဲ့ အရာသုံးခုညီမဆီမှာရှိတယ်။ 1. အထူးသဖြင့် အမေ အဖေ အဘွားနဲ့ မိသားစုကို စိတ်ချမ်းသာစေချင်လို့ သူတို့က ကိုလှတာကိုအရမ်းမြင်ချင်ခဲ့တာဆိုတော့ သူတို့ကိုစိတ်ချမ်းသာစေချင်လို့ ပြီးတော့ မေမေက အနုပညာရှင်ဆိုတော့ သူများသားသမီးတွေ အရမ်းချောအရမ်းလှနေတော့ သူ့အနေနဲ့ မျက်နှာငယ်ခဲ့ရပေါင်းများပြီ အဲ့ဒါကြောင့် မေမေ့ကို စိတ်ချမ်းသာစေချင်လို့ 2. သူများတွေရဲ့ အပြောအဆိုခံ နှိမ်ခံတာတွေ မခံချင်တော့လို့
3. အရင်က ဝတော့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမလုပ်နိုင်ဘူး။ အဲ့တော့ အမေနဲ့ ခရီးတွေသွားရင် အမေ့ကို မကူနိုင်ခဲ့ဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် အမေနဲ့ ဘယ်သွားသွား မေမေ့ကို ကူညီပေးချင်လို့ အဲ့သုံးချက်က ညီမကိုတွန်းအားပေးစေခဲ့တာ ” ဆိုပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မေခလာရဲ့ သမီးလေးကတော့ ငယ်စဉ်ကတည်းက အဝလွန်ခဲ့တာကြောင့် စနောက်ကျီစယ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပြီး မေမေ့ကိုလည်း စိတ်ချမ်းသာပြီး ပျော်စေချင်တာကြောင့် ဝိတ်ချခဲ့တယ်လို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မေမေ့ကိုချစ်တဲ့ သမီးလေး ဒီထက်မက ကံကောင်းခြင်းတွေနဲ့သာ ကြုံတွေ့နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Source: Pyae Pyae’s fb
သူမြားအနုပညာရှငျသားသမီးတှလေို မလှတာကွောငျ့ မကျြနှာငယျခဲ့ရတဲ့ မမေအေ့တှကျ ကွိုးစားပွီး ဝိတျခပြေးခဲ့တယျဆိုတဲ့ မခေလာရဲ့သမီးလေး ပွညျ့ပွညျ့
သီခငျြးမွူးမွူးလေးတှကေို သီဆိုတတျပွီး အမွဲတမျး သှကျလကျခကျြခြာနတေဲ့ အဆိုတျော မခေလာကတော့ ဒီနဒေီ့အခြိနျထိ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးဝနျးရံမှုကို ရရှိနဆေဲ ဖွဈပါတယျ။ မခေလာက သရုပျဆောငျ ရနျကြျောနဲ့ လကျထပျပွီး သမီးလေးတဈယောကျတညျးကိုသာ မှေးဖှားထားပွီး သာယာပြျောရှငျတဲ့ မိသားစုလေးကို တညျဆောကျထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီကနမှေ့ာတော့ (၂)လအတှငျး ကိုယျအလေးခြိနျ ပေါငျ(၅၀)ကြျော ခနြိုငျခဲ့တဲ့ မခေလာရဲ့သမီးလေး ပွညျ့ပွညျ့က သူမဝိတျခရြခွငျးအကွောငျးကို အခုလိုပဲ ပွောလာပါတယျ။
“ညီမကို ဝိတျခဖြို့ တှနျးအားဖွဈစခေဲ့တဲ့ အရာသုံးခုညီမဆီမှာရှိတယျ။ 1. အထူးသဖွငျ့ အမေ အဖေ အဘှားနဲ့ မိသားစုကို စိတျခမျြးသာစခေငျြလို့ သူတို့က ကိုလှတာကိုအရမျးမွငျခငျြခဲ့တာဆိုတော့ သူတို့ကိုစိတျခမျြးသာစခေငျြလို့ ပွီးတော့ မမေကေ အနုပညာရှငျဆိုတော့ သူမြားသားသမီးတှေ အရမျးခြောအရမျးလှနတေော့ သူ့အနနေဲ့ မကျြနှာငယျခဲ့ရပေါငျးမြားပွီ အဲ့ဒါကွောငျ့ မမေကေို့ စိတျခမျြးသာစခေငျြလို့ 2. သူမြားတှရေဲ့ အပွောအဆိုခံ နှိမျခံတာတှေ မခံခငျြတော့လို့
3. အရငျက ဝတော့ ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုမလုပျနိုငျဘူး။ အဲ့တော့ အမနေဲ့ ခရီးတှသှေားရငျ အမကေို့ မကူနိုငျခဲ့ဘူး။ အဲ့ဒါကွောငျ့ အမနေဲ့ ဘယျသှားသှား မမေကေို့ ကူညီပေးခငျြလို့ အဲ့သုံးခကျြက ညီမကိုတှနျးအားပေးစခေဲ့တာ ” ဆိုပွီး ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောလာခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
မခေလာရဲ့ သမီးလေးကတော့ ငယျစဉျကတညျးက အဝလှနျခဲ့တာကွောငျ့ စနောကျကြီစယျခွငျးကို ခံခဲ့ရပွီး မမေကေို့လညျး စိတျခမျြးသာပွီး ပြျောစခေငျြတာကွောငျ့ ဝိတျခခြဲ့တယျလို့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောလာခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ မမေကေို့ခဈြတဲ့ သမီးလေး ဒီထကျမက ကံကောငျးခွငျးတှနေဲ့သာ ကွုံတှနေို့ငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။ ဖတျရှုပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။